Adeegga Bakhaarka Shiinaha iyo wakiilkiisa | Sunson
Bixiso adeeg bakhaar hufan, ammaan ah oo bilaash ah gudaha Shiinaha
Waxaan haynaa bakhaar 3000 + mitir murabac ah oo ku yaal Shenzhen ， Bixiya adeegsi bilaash ah seddex bilood macaamiisha cusub, iyo sidoo kale bilaash ka dib 3months adiga oo ku saleynaya waxaad leedahay ugu yaraan 60Pcs amarada dhoofinta bishiiba ， 3000m² bakhaar ayaa la kulmi kara baahidaada sii kordheysa ee sii kordheysa ... dalbo oo u diyaarso rar. Waxaan nahay Bakhaarka Shiinaha si aan u ilaalino keydkaaga mid amaan ah ， oo lagu dhameystirayo ilaalinta 24/7 iyo amniga.
Step1 ： Bakhaarka Bakhtiiyeyaasha
Waxa aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad horay u sii buuxiso ogeysiiska maraakiibta (ASN) ka hor inta aanad u dirin alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha ee bakhaarka sunson Shiinaha. Sidan oo kale, nidaamkayaga bakhaarka ayaa ogaan doona badeecadaada iyo tiradaada, wuxuuna hubin karaa helitaanka iyo ka shaqeynta waqtigeeda.
Tallaabada 2. Kormeerka & Calaamadeynta Alaabada
Shaqaalaheena bakhaarka qaata ayaa tirin doona tirada iyo tayada wax soo saarka ka hor inta aan la keydin si loo hubiyo saxnaanta tirada iyo tayada wax soo saarka, taasoo yareyneysa halista nadiifinta caadooyinkaaga iyo heerka soo celinta dukaanka. Shey kasta waxaa lagu dhajinayaa lambarka baar, waxyaabaha qaaliga ahna si gooni gooni ah ayaa loola socon doonaa oo gooni gooni ayaa loo keydin doonaa si loo hubiyo in khalad uusan ka jirin bakhaarka iyo wax soo qaadista.
Step3: Kaydinta Sunson Warehouse
Haddii amaradaaga E-Ganacsi ay ku yaalliin adduunka oo dhan, kaydinta Shiinaha waa doorashada ugu fiican. Sababtoo ah kharashka adeegsiga xarunta qaybinta bakhaarada Shiinaha ayaa ka hooseeya xawaaraha gaadiidkuna waa ka dhaqso badan yahay.
Tallaabada 4. Maareynta Alaabada
Sunson waxay leedahay nidaam maareynta bakhaarka horumarsan (WMS) ee maareynta alaabada iyo saxnaanta alaabada. Waxaan hubineynaa in saxnaanta tiradu ay ka sarreyso 99%. Tirakoobka waqtiga dhabta ah ayaa kugu habboon adiga inaad kormeerto tirada alaabada oo aad dib u buuxiso tirakoobka waqtiga si looga hortago yaraanta.
Waxqabadka Bakhaarka Shiinaha
Adeeg Fulin Bakhaarka Shiinaha
Adeeg Fulin Bakhaarka Shiinaha ee Iibiyeyaasha Bigcommerce
Adeeg Fulin Bakhaarka Shiinaha ee Iibiyaasha EBay
Adeeg Fulin Bakhaarka Shiinaha ee Iibiyeyaasha Rabitaanka
Adeeg Fulin Bakhaarka Shiinaha ee Iibiyeyaasha Woocommerce